के तपाई सागसब्जीको बोक्रा छोडाएर खाने गर्नुहुन्छ ? थाहापाउनुहोस् सागसब्जीको बोक्रा छोडाएर खाने कि नछोडाइ खाने ? - ज्ञानविज्ञान
Don't Miss it यी हुन् संसारका सबैभन्दा हानिकारक खानेकुरा – यस्ता छन् पकाएर र मिसाएर खान नमिल्ने खानेकुरा
Up Next कसरी सुत्नेको व्यक्तित्व कस्तो हुन्छ ? कता फर्केर सुत्ने ? जान्नुहोस्
मानिसलाई खाना खाएपछि मुखमा अमिलो पानी आउने, छाती तथा घाँटी पोल्ने हुनसक्छ, जसलाइ ‘हार्ट बर्न’ भनिन्छ । हार्ट बर्न भन्ने…